Izithuthi zemishini Upholstery factory, abahlinzeki - China Izithuthi Abaphakeli besikhumba abakhiqizi
Amandla Peel Amandla Aphefumulelwa Imoto Microfiber PU Isikhumba
Igama eligcwele lesikhumba se-microfiber "yisikhumba esiqinisiwe se-microfiber". Ngeyesikhumba esisha sokunamathisela esenziwe ngesikhumba sokwenziwa. Ngeyohlobo olusha lwesikhumba.
Isikhumba Esinemibala Eningi Ne-Good Abrasion Resistant Microfiber
Igama eligcwele lesikhumba se-microfiber "yisikhumba esiqinisiwe se-microfiber". Ngeyesikhumba esisha sokunamathisela esenziwe ngesikhumba sokwenziwa. Ngeyohlobo olusha lwesikhumba. Inokumelana nomhuzuko, ukumelana okubandayo, ukuphefumula, ukumelana nokuguga, nokuthungwa okuthambile. , Ukuvikelwa kwemvelo nokubukeka okuhle, kuyisinqumo esingcono kakhulu sokufaka isikhumba semvelo (isikhumba sokuqala senkomo), manje amabhizinisi amaningi azothengisa isikhumba se-microfiber njengesikhumba sokuqala senkomo ngamanani aphezulu.
0.6mm - 1.4mm Microfiber Isikhumba Esenziwe Ngezikhumba Sesikhumba Sezimoto
Isikhumba se-1.2mm microfiber sezimoto, nge-handfeel ethambile nobuso obuhle.Isisindo esincane, i-30% ilula kunesikhumba semvelo, ihlangabezana nezidingo zokuklanywa kwesisindo esincane kanye nomnotho wephethiloli.
Umhlinzeki wesikhumba waseChina wemoto yesembozo semoto we-Microfiber
Igama eligcwele lesikhumba se-microfiber "yisikhumba esiqinisiwe se-microfiber". Inokumelana nokukhathazeka kokugqoka, ukuphefumula, ukumelana nokuguga, ukuthamba nokunethezeka, nokuguquguquka okuqinile.
Isikhumba se-0.7-1.4mm Microfiber se-Auto Upholstery
Imizwa ethokomele, efana nesikhumba semvelo, yenza izihlalo zakho nengaphakathi likhululeke kakhulu.
Imoto Upholstery Microfiber Isikhumba Indwangu Yangaphakathi Yokuhlobisa Isikhumba
Kuyisikhumba sokufakelwa esinokuqukethwe okuphezulu kakhulu kwezobuchwepheshe njengamanje. Ikhwalithi ephezulu yesikhumba se-microfiber ihlanganisa izinzuzo zezikhumba eziningi. Inamandla futhi ihlala isikhathi eside kunesikhumba, kulula ukuyicubungula, futhi inezinga eliphezulu lokusetshenziswa.
Ukuthengisa Okushisayo Isikhumba se-Vegan Microfiber Isikhumba se-Car Seat
Ku-PU polyurethane ingeze i-microfiber, ngakho-ke lesikhumba sinezinto ezinhle kakhulu zokugqoka, ezingeni elithile ukunweba ukusetshenziswa kwesikhathi sesikhumba, futhi ekuphefumuleni nasekuguquguqukeni kukuhle kakhulu, thinta ngale kwesikhumba semvelo.
I-Blue Microfiber Isikhumba Ukuqina Kwesikhumba Sesikhumba Upholstery
Igama eligcwele lesikhumba se-microfiber "yisikhumba esiqinisiwe se-microfiber". Ngeyesikhumba esisha sokunamathisela esenziwe ngesikhumba sokwenziwa. Ngeyohlobo olusha lwesikhumba. Inokumelana nomhuzuko, ukumelana okubandayo, ukuphefumula, ukumelana nokuguga, nokuthungwa okuthambile. Ukuvikelwa kwemvelo nokubukeka okuhle, kuyisinqumo esingcono kakhulu sokufaka esikhundleni sesikhumba semvelo (isembozo sokuqala senkomo).
Ngokwezifiso ze-Microfiber Leather Material Vehicle Leather Upholstery
Microfiber lesikhumba uhlobo lesikhumba kabusha, ukuvikelwa kwemvelo, akukho ukungcola, kungaba esikhundleni esihle isikhumba yemvelo.Strong imvelo ukuvikelwa, ukufinyelela amazinga eco-friendly.
I-100% PU Microfiber Isikhumba Yangaphakathi Yemoto Upholstery
Inokumelana nomhuzuko, ukumelana okubandayo, ukuphefumula, ukumelana nokuguga, nokuthungwa okuthambile. Ukuvikelwa kwemvelo nokubukeka okuhle, kuyisinqumo esingcono kakhulu sokufaka isikhumba semvelo (isikhumba sokuqala senkomo), manje amabhizinisi amaningi azothengisa isikhumba se-microfiber njengesikhumba sokuqala senkomo ngamanani aphezulu.
1mm Faux PVC Isikhumba Sokufakelwa Esingashadile noma Esimaceleni Amabili
Uma kuqhathaniswa nezinye izikhumba, isikhumba se-PVC kulula ukusifaka kupulasitiki futhi sihlanzeke kangcono, imvamisa nethawula elimanzi noma ithawula lephepha elimanzi. Iningi lezikhumba ze-PVC ezenziwe nguBensen zisesitokweni, sicela uxhumane nathi uma udinga eminye imininingwane noma amasampula.
I-0.45mm-1.5mm PU Isikhumba Sokufakelwa se-PU Izinto ze-Car Seat Cover
Uma kuqhathaniswa nesikhumba se-PVC, isikhumba se-PU sinokuzwakala okungcono kwesandla kanye nokumelana nokugqoka. Isikhumba se-PU esikhiqizwa yiBensen sinobungani bemvelo, uma udinga isikhumba se-PU, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.